‘त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा हुनुहुँदैन’
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र यसले पार्ने असर’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकार...
काठमाडौं (अस) । नेपाल मिडिया सोसाइटीले न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यकक्षबाटै पत्रकारलाई पूर्व सूचनाविना अचानक पक्राउ गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । सोसाइटीले शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर प्रहरीले गरेकोे उक्त अवैधानिक कार्यप्रति खेद व्यक्त गरे...
अर्थ समितिमै रोकियो बीमा विधेयक : समिति भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले नै समय दिएको छैन’
काठमाडौं । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘बीमा विधेयक, २०७५’ करीब १ वर्षदेखि संघीय संसद्को अर्थ समितिमै रोकिएको छ । २०७५ असार २७ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई साउन १७ गते सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसलगत्तै अर्थ समितिमा पेश भएको विधेयकमाथि गत मङ्सिरमा सरो...
शिवम्को आम्दानी ११ अर्ब ३४ करोड
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सिमेन्ट विक्रीबाट रू. ११ अर्ब ३४ करोड आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आव २०७४/७५ को भन्दा रू. १ अर्ब ८ करोडले बढी हो । कम्पनीले सो वर्ष रू. १० अर्ब २६ करोड आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले बिहीवार सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय वि...
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक संसद्मा अड्किए
काठमाडौं । गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरणका लागि थप कानूनहरू छिट्टै नै संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, लगानी सम्मेलन सकिएको ५ महीना बितिसक्दा पनि ती कानून संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेका छैनन् । ठूला पूर्वाधार तथा विका...
‘फ्लाइङ स्कूल’ खोल्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फ्लाइङ स्कूल खोल्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा हवाई सेवा उद्योगको संख्या बढिरहेको र दक्ष पाइलटको माग भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो योजना अघि सारेको हो । देशभित्रै उडान सम्बन्धी स्कूल आवश्यक देखिएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूल खोल्न...
रसुवागढी–रातमाटे विद्युत् प्रसारण लाइन : लाङटाङ निकुञ्जभित्र काम गर्न वनको स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत पर्ने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुँदै प्रसारण लाइन संरचना निर्माण गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृति दिएको हो । चीनको सिमा...
महासंघ विधान संशोधन : विशेष साधारणसभाको मिति तोकेपछि विवाद
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभाको मिति कात्तिक २९ गतेलाई तोकिएसँगै महासंघको आगामी नेतृत्व बारेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विशेष साधारणसभामा महासंघको विधान संशोधन समितिले तयार गरेको ३५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्नका लागि पेश गरिनेछ । उक्त प्रस्ताव पारित भए महासंघका वरिष्ठ उपाध...
साउन ३२, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेका र बन्द भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उच्च प्रतिफल हासिल गरेको छ । एकाध व्यक्तिको प्रयत्न तथा राजनीतिक नेतृत्वको सही दृष्टिकोण भयो भने सफलता प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ । &n...
किन दयनीय बन्दैछन् जलविद्युत् कम्पनीका शेयर ?
साउन ३२, काठमाडौं । आमरूपमा शेयर बजारमा उच्च प्रतिफल कमाउनका लागि नै लगानी गर्ने गरिन्छ । तर, बजारमा कारोबार भएका केही कम्पनीको अवस्था हेर्ने हो भने अवस्था खराब रहेको देखिन्छ । प्रतिफल कमाउनका लागि गरिएको लगानीसमेत घटेर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । प...